घरघरमै नर्सिङ सेवा दिँदै-करुणा होम केयर!
लाखौँ खर्च गरेर नर्सिङ पढेका थुप्रै जनशक्ति नेपालमा पढाई अनुसार काम नपाएर बेरोजगार बसिरहेका भेटिन्छन्। कतिसम्म भने २ देखि ३ वर्षसम्म कुनै तलब/सुविधा नलिई अस्पतालमा स्वयम् सेवा गरिरहेका नर्सहरू समेत भेटिने गरेका छन्। जसले काम पाएका छन्, उनीहरू समेत आफूले नर्सिङ पढ्ने क्रममा गरेको दु:ख र लागेको खर्च अनुसारको तलब सुविधा नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा होमिन बाध्य हुने गरेको पाइन्छन्।
यो त भयो नर्सहरूको मर्का, बिरामीहरूको मर्का पनि छुट्टै छ। छोराछोरी पढाइ नभए रोजगारीका लागि विदेशिने र घरमा बुढा बाआमा एक्लै हुने। विदेश नै नगएका छोराछोरी पनि काममा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू कार्य व्यस्तताका कारण घरका सदस्यलाई चाहे जति समय दिन सकिराखेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ त घरको कुनै सदस्य अपर्झट बिरामी पर्दा समेत अस्पताल दौडाउने कोही हुँदैन। अस्पतालबाट फर्किएपछि बिरामीले आफ्नो स्याहारसुसार पनि आफै गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्ता समस्या धेरै देखिए तर समाधान कतै नभेटेपछि मेरिना श्रेष्ठ र चन्चला श्रेष्ठले ललितपुरको कुपन्डोलमा सुरु गरे “करुणा होम केयर” । यस व्यवसायले बिरामी र वृद्धवृद्धाहरूलाई घरघरमै गएर स्याहारसुसार गरिदिने सेवा दिन्छ। यसबाट एकतिर बेरोजगार बस्नु परेका नर्सहरूले रोजगारी पाएका छन् भने अर्कोतिर उचित स्याहार नपाएका बिरामी र वृद्धवृद्धाहरूले पनि आफ्नो हेरविचार गरिदिने दक्ष मान्छे पाउने गरेका छन् ।
मेरिना र चन्चला विराटनगरमा जन्मे। उतै पढे उतै हुर्के। नर्सिङको पढाइ सकेर काम गर्न भनी काठमाडौँ आए। काठमाडौँमै उनीहरूको चिनजान भयो। चन्चलाले गङ्गालाल अस्पतालमा काम पाइन् र मेरिनाले ग्रिनसिटीमा। आफूले पढेको र चाहेको क्षेत्रमा काम गर्न दुवैजना खुसी नै थिए। तर बिस्तारै मेरिनालाई असन्तुष्टि बढ्दै गयो। उपचार सकेर घरमा आराम गर्न पठाउँदा पनि हेरचाह गर्ने कोही नभएको कुरा अस्पतालमा धेरै बिरामीले सुनाउँथे।। यसरी बिरामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको उनले बुझिन्। यसले मेरिनाको मन खल्लो गराउन थाल्यो। यस्तो हुँदा उनलाई घर घरमा पर्सनल नर्स पठाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। अस्पतालमा तलब पनि खासै चित्तबुझ्दो थिएन। पढाइमा लागेको खर्च उठाउन पनि वर्षौँ लाग्ने देखियो।
यो कुरा मेरिनाले चन्चलालाई नराखी बस्न सकिनन्। उनको असन्तुष्टिले उनलाई चन्चलासम्म दौड्यायो। आखिर दुवै जना नर्स पढेका, यसरी अरूकोमा काम गर्नुभन्दा मर्कामा परिरहेका बिरामीहरूलाई आफै सेवा किन नदिने? उनले केयर होम खोल्ने सल्लाह राखिन्। उता चन्चलाले पनि अस्पतालको आफ्नो लामो अनुभवमा यीनै समस्या देख्दै आएकी थिइन्। उनले मेरिनाको प्रस्तावलाई सजिलै स्विकारिन्।
यसरी बिरामी र नर्स दुवैको समस्या समाधान गर्न उनीहरूले सेवामूलक कम्पनी खोले। “माया र सेवाको भावनासँग जोडिएको व्यवसायको लागि सबै भन्दा उचित नाम के हुन सक्ला?” उनीहरूले धेरै सल्लाह पछि होम केयरको नाम राख्ने निधो गरे “करुणा” । होम केयर सुरु त् गरे तर यस्तो सेवा दिने व्यवसाय पनि हुनसक्छ भनी धेरै नेपालीहरूलाई थाहा नै थिएन। सुरुमा उनीहरूलाई आफ्नो लक्षित ग्राहक पहिल्याउनै कठिन पर्‍यो। यो समस्या हल गर्न आफ्नो व्यवसायलाई अनलाइन माध्यमबाट विस्तार गर्ने निर्णयमा पुगे। नेपालमा त अनलाइन भनेकै फेसबुक जस्तो भएको छ। उनीहरूले वेबसाइट ( www.karunahomecare.com ) सँगसँगै फेसबुकबाट धेरै व्यक्तिहरूसम्म पुग्ने कोसिस गरे। भिजिटिङ कार्ड र पम्प्लेटहरु बाँडे। सबै जना सम्म एकै चोटि पुग्न त सम्भव थिएन तर जतिले करुणा होम केयरका बारेमा थाहा पाए, निकै उत्सुक भए। नर्सहरू खोज्न भने त्यति सकस परेन।
बिरामीहरूले बिस्तारै सम्पर्क गर्न थाले। सेवा लिनेले चिनेजानेकालाई पनि भनिदिन थाले। ग्राहकको सङ्ख्यामा ढिलै भए पनि बिस्तारै वृद्धि हुन थाल्यो। आफूले सुरु गरेको व्यवसायले नर्सहरूलाई जागिर पनि दियो र बिरामीलाई सेवा पनि।
चन्चला भन्छिन्, “तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले युवा र वृद्धवृद्धाको रेसियो १:५ छ। यसले भविष्यमा ५ जना वृद्दब्रिद्दालाई हेर्नका लागि एक जना युवा पनि नहुने समस्या आउने सङ्केत गर्छ। त्यसैले केयर होम अबको आवश्यकता बन्दै गएको छ।”
“Close to home, close to family” नाराका साथ सुरु गरिएको करुणा होम केयरको उद्देश्य घरघरमै गएर गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा प्रदान गर्नु हो। बिरामीको स्याहारसुसार मात्र नभएर घरमा व्यायाम गराउने देखि फिजीओथेरापी, रगत सम्बन्धी सबै जाँच, स्लाइन पानी चढाउने, नाकबाट खाना खुवाउने, पिसाब गराउनका लागि पाइप फिटिङ गरिदिने र घाउ लाग्दा ड्रेसीङ गर्नेसम्मको सेवा दिँदै आएका छन्। यहाँसम्म कि जाँचपछिका रिपोर्ट पनि घरघरमै पुर्याइदिने सुविधा छ। एक पटक सेवा दिएका बिरामीहरूको सबै विवरणहरू राख्ने गर्छन्। यसो हुँदा फेरी पछि उनीहरूलाई नै सेवा दिनुपर्‍यो भने पहिला के भएको थियो भन्ने कुरा सोधिरहनु पर्दैन।
अहिलेसम्म उनीहरूले २५ देखि ३० जना ग्राहकहरूलाई सेवा दिइसके। सरकारले एउटा स्कुलमा एउटा नर्स हुनुपर्ने नीति ल्याएपछि घरमा मात्र नभएर स्कुलबाट पनि माग आउन थालेको छ। अहिले स्कुलहरूमा पनि नर्स पठाइरहेका छन्।
नर्स चाहिएमा अनलाइन आव्हान गर्छन्। कम्तीमा पी.सी.एल पास गरेका नर्सहरूलाई मात्र सेवामा पठाउने गरेका छन्। साथै घर र बिरामीको वातावरणमा राम्रोसँग घुलमिल गराउनका लागि अग्रिम तालिम पनि दिन्छन्। अस्पतालमा काम गरेका नर्सहरूलाई घरमा काम गर्ने बानी हुँदैन भनेर उनीहरूले कसरी बोल्ने, कसरी हेरचाह गर्ने, कस्तो अवस्थामा के गर्ने लगायतका सबै कुराहरू सिकाएर पठाउँछन्। बिचमा केही समस्या परेमा मेरिना र चन्चला २४ सै घण्टा नर्सलाई सघाउन तयार बसेका हुन्छन्। यसरी आफ्नो कामको गुणस्तरमा धेरै ध्यान दिएका कारण नै होला उनीहरूले ग्राहकहरूबाट कहिल्यै गुनासो सुन्नुपरेको छैन।
मेरिना भन्छिन्,”यो काम सुरु गरेकाले धेरै खुसी छौँ। अहिलेसम्म कहीँबाट पनि गुनासो आएको छैन। नर्सहरू पनि सबै बुझकी हुनुहुन्छ।”
उनीहरूले केही समय अघि सितापाइलामा रहेका दुई वृद्धवृद्धा दम्पतीलाई सेवा दिए। श्रीमानको किड्नीमा समस्या देखिएपछि श्रीमती गीताले आफ्नो एउटा किड्नी दिएर उनको ज्यान बचाइन्। अप्रेसन सकियो। अस्पतालमा सधैँ बस्ने कुरा भएन। घर फर्किएपछि दुवैजना अशक्त र एक्लै। हेरिदिने कोही नभएपछि उनीहरूले करुणा होम केयरलाई सम्झिए। नर्सहरूले दिएको सेवाबाट अहिले दुवैजना निकै खुसी छन्।
गीता भन्छिन्, “धेरै राम्रो लागको छ यहाँहरूको सेवा, हामीलाई सुरुमा त नेपालमा यस्तो सुविधा छ भनेर नै थाहा थिएन। घर परिवारको सदस्य जस्तै भइसक्नुभयो तपाईँहरू, अब टाढा पठाउन नै मन छैन।”
करुणा होम केयरले उनीसँग गरेका कुराकानीको भिडियो हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जुन समयमा पनि फोन गर्न सकिने र थोरै रकममा घरमै आएर सेवा दिने भएकाले धेरै ग्राहकहरू करुणा होम केयरप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। बोलाइसकेपछि कम्तीमा ६ घण्टा सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। ६ घण्टाको रु. ५००, ८ को रु.७५०, १२ को रु.१००० र २४ घण्टाको २००० लिने गरेका छन्। लामो अवधिका लागि लिने हो भने छुटको पनि व्यवस्था छ।
दीर्घकालीन रोग लाग्ने बिरामीहरू देशमा बढ्दो मात्रामा छन्। घरमा हेरचाह गरिदिने सदस्य भने घटीरकेका छन्। यस्तो अवस्थामा चन्चला र मेरिनाले सुरु गरेको व्यवसायले धेरैलाई सजिलो पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट पनि धेरै माग आइरहन्छन्।भविष्यमा यो सेवा उपत्यकामा मात्र नभएर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्‍याउने उनीहरूको सोच रहेको छ।
करुणा होम केयरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्:
फोन: ९८१८३८१३१८, ९८६२९०९३६०
तलको युट्युब भिडियोमा उद्यमी नेपाल र करुणा होम केयर बीच भएको प्रतक्ष अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्: